မိမိအမြင်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ပြောခဲ့တာကြောင့် ဂျပန်ပရိသတ်တွေစိတ်ပျက်စေမိခဲ့တဲ့ Moon Geun Young – Cele Gabar
ကိုရီးယားဒရမ်မာဇာတ်လမ်းတွဲတွေဟာ ပရိသတ်တွေကိုဖမ်းစားနိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်း တွေပါပဲ။ဒရမ်မာဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြောင့် နာမည်ကြီးပြီးနိုင်ငံတကာပရိသတ်ပါရခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားမင်းသမီးလေးကတော့ Moon Geun Young ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပရိသတ်တွေကတော့ အွန်စောအငယ်လေးလို့သိကြတာပါ။
Moon Geun Young ဟာ မကြာသေးခင်က အင်စတာဂရမ်မှာပိုစ့်တစ်ခုတင်ပြီး ဂျပန်ပရိသတ်တွေကို စိတ်ပျက်စေမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပိုစ့်မှာတော့ Hoodie လေးတစ်ခုကိုဝတ်ဆင်ထားပြီး “မင်းတို့သိလား? Dokdo Campaign ကို ထောက်ခံပါတယ်။ Dokdo က ငါတို့ရဲ့အပိုင်မြေပါပဲ” လို့ရေးထားခဲ့တာပါ။
Dokdo ကတော့ ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကြားနှစ်(၃၀၀)ကြာအောင်နယ်မြေအငြင်းပွားနေတဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။ Moon Geun Young ဟာ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အားပေးထောက်ခံတဲ့အကြောင်းရေးသားလိုက်တာကြောင့် ဂျပန်ပရိသတ်တွေက စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ မှတ်ချက်များစွာကိုပေးခဲ့ကြပါတယ်။ “မင်းရဲ့ပရိသတ်အဖြစ်ရှိနေခဲ့တာကြာပါပြီ။ဒီနေ့ကစပြီးအဲဒီလိုမဟုတ်တော့ပါဘူး” “မင်းကိုတကယ်ကြိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုတော့စိတ်ပျက်ရပြီ” စသဖြင့်ရေးသားခဲ့ကြတာပါ။၏
တောင်ကိုရီးယားပရိသတ်တွေကတော့ Moon Geun Young ဘက်ကနေပြီးအားပေးထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။
မိမိအမွငျကိုပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးထုတျပွောခဲ့တာကွောငျ့ ဂပြနျပရိသတျတှစေိတျပကျြစမေိခဲ့တဲ့ Moon Geun Young
ကိုရီးယားဒရမျမာဇာတျလမျးတှဲတှဟော ပရိသတျတှကေိုဖမျးစားနိုငျတဲ့ ဇာတျလမျးကောငျး တှပေါပဲ။ဒရမျမာဇာတျလမျးတှဲတှကွေောငျ့ နာမညျကွီးပွီးနိုငျငံတကာပရိသတျပါရခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားမငျးသမီးလေးကတော့ Moon Geun Young ဖွဈပါတယျ။မွနျမာပရိသတျတှကေတော့ အှနျစောအငယျလေးလို့သိကွတာပါ။
Moon Geun Young ဟာ မကွာသေးခငျက အငျစတာဂရမျမှာပိုဈ့တဈခုတငျပွီး ဂပြနျပရိသတျတှကေို စိတျပကျြစမေိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။အဲ့ဒီပိုဈ့မှာတော့ Hoodie လေးတဈခုကိုဝတျဆငျထားပွီး “မငျးတို့သိလား? Dokdo Campaign ကို ထောကျခံပါတယျ။ Dokdo က ငါတို့ရဲ့အပိုငျမွပေါပဲ” လို့ရေးထားခဲ့တာပါ။
Dokdo ကတော့ ကိုရီးယားနိုငျငံနဲ့ ဂပြနျနိုငျငံတို့ကွားနှဈ(၃၀၀)ကွာအောငျနယျမွအေငွငျးပှားနတေဲ့ နရောတဈခုပါ။ Moon Geun Young ဟာ ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး အားပေးထောကျခံတဲ့အကွောငျးရေးသားလိုကျတာကွောငျ့ ဂပြနျပရိသတျတှကေ စိတျပကျြလကျပကျြနဲ့ မှတျခကျြမြားစှာကိုပေးခဲ့ကွပါတယျ။ “မငျးရဲ့ပရိသတျအဖွဈရှိနခေဲ့တာကွာပါပွီ။ဒီနကေ့စပွီးအဲဒီလိုမဟုတျတော့ပါဘူး” “မငျးကိုတကယျကွိုကျတာပါ။ဒါပမေဲ့အခုတော့စိတျပကျြရပွီ” စသဖွငျ့ရေးသားခဲ့ကွတာပါ။၏
တောငျကိုရီးယားပရိသတျတှကေတော့ Moon Geun Young ဘကျကနပွေီးအားပေးထောကျခံခဲ့ကွပါတယျ။
ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ပရိသတ်တစ်ယောက်ကို ကျောင်းလခကူညီပေးလိုက်တဲ့ Taylor Swif t
ပရိသတ်တွေတအံ့တသြဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်စကပ်အကွဲနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့သူ Twice အဖွဲ့ဝင် Nayeon